#Natiijada kulamadii Axmed Madoobe oo Ay Beesha Caalamka ka hadashay
War qoraal ah oo ay wadajir u soo saareen Qaramada Midoobe, Midowga Afrika iyo urur Goboleedka IGAD waxa ay uga hadleen waxyaabihii ay kala soo kulmeen Madaxweynaha waqtiga ka dhamaaday ee Jubaland Axmed Madoobe.
Qoraalkooda oo ay heshay saxafadda, waxey uga digeen iney sii socoto khilaafaadka hareeyay doorashada madaxtinimo ee Jubaland, taasoo laga cabsi qabo iney ugu danbeyn gacan ka hadal isu bedesho.
Waxey ku baaqeen in doorashada ay ka qeyb qaataan dhamaan dhinacyada Siyaasada ee Jubaland, si taasi loo helana loo baahan yahay in la sii horumariyo habraaca doorashada oo hada u muuqda mid dadka qaar xadidaya.
“Waxaan ugu baaqeynaa dhammaan dhinacyada Jubbaland inay ka fogaadaan wixii ammaan daro keeni kara iyo weliba cabsi gelin ayna khilaafkooda ku xaliyaan wadahadal si ay u helaan kalsoonida bulshada, Wakiilada ka socda AU, IGAD iyo UN waxa ay xoojinayaan baahida loo qabo hab doorasho oo la isku raacsan yahay taasoo waafaqsan dastuurka Jubbaland iyo kan Federalka” ayaa lagu yiri qoraalkan.
Si kastaba, Madaxweynaha Jubaland Axmed Madoobe ayaa u sheegay xubnihii beesha Caalamka ka socday in arrimaha doorashooyinka uusan isaga go’aano ka gaari Karin, balse ay tahay wax u yaala Guddiga doorashooyinka, waxey soo saaraanna la qaadanayo.